स्थायी कमिटी लगत्तै मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन, बामदेव पनि भित्रने - नेपालबहस
स्थायी कमिटी लगत्तै मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन, बामदेव पनि भित्रने
| १०:५७:०४ मा प्रकाशित
२५ भदौ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चर्किएको अन्तरद्धन्द्ध हाललाई साम्य भएको छ । दुई अध्यक्षबीचको शक्ति बाँडफाँडका आधारमा पार्टीभित्र अस्थायी युद्धविराम भएको हाे । भोलिका लागि डाकिएको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्षद्वयले पेश गर्ने एकता प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने छ । साथै, भोलिबाटै जारी स्थायी कमिटी बैठकसमेत अन्त्य गर्ने तयार भएको बुझिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल भरि पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्वाध काम गर्ने र आगामी महाधिवेशनसम्म अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको सबै कार्यकारी काम गर्ने गरी सहमति गरिएको छ । यो सहमति स्वीकार गर्ने स्थायी कमिटीमा अन्य विषयमा भने कुनै छलफलसमेत नगर्ने रणनीति ओली पक्षको रहेको छ ।
मूलतः अर्का नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले उठाएको एक व्यक्ति एक पदको विषयमा कुनै छलफलसमेत हुने देखिएको छैन । तर, गत साता ओली आफैंले सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव गरेको उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विषयमा भने कुरा उठाउने तयारी रहेको बुझिएको छ । गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने भनी स्वयं प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेकोमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको विषयमा केही सदस्यले कुरा उठाउने बुझिएको छ । यसका साथै, गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने भनी गरिएको निर्णयले पार्टी बद्नाम भएको आवाजसमेत कतिपय नेताले उठाएका छन् ।
स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजानै पर्ने के वाध्यता आइप¥यो भन्ने विषयमा कुरा उठ्ने बताए । जनताबाट तिरस्कृत पात्रलाई राष्ट्रियसभामा पठाएर त्यो संस्थाको गरिमा नै धुमिल पारेको भन्दै उनले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ नेतृत्वले दिनुपर्ने उल्लेख गरे । पटक–पटक पार्टी र सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहिसकेका गौतमलाई यसपटक संसद्मा नजाने जनताको आदेश भएकाले जबर्जस्ती पठाउने काम गरियो भने त्यसले पार्टी र सरकार दुबैलाई ठूलो क्षति पुग्ने उनको धारणा छ ।
यस्तै अर्का स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गलत भएको भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्न माग गरिन् । उनले भनिन्– म पनि यसबारे भोलिको स्थायी कमिटी बैठकमा कुरा उठाउने छु ।
राष्ट्रियसभा भनेको प्रतिनिधिसभा भन्दापनि महत्वपूर्ण र गहन निकाय भएको तर्क गर्दै उनले नेतृत्वले यसको गरिमा ध्वस्त बनाउन खोजेको आरोप लगाइन् । वामदेव कम्रेड एक कार्यकाल संसद बाहिर बस्न नहुने हो र ? भन्दै उनले जनताको आदेश शिरोपर गरेर अगाडि बढियो भने मात्र सही बाटो पहिल्याउन सकिने बताइन् । यस्तै, ओली निकट केही स्थायी कमिटी सदस्यहरुले समेत गौतमको विषयमा कुरा गर्ने भएका छन् । यद्यपि बैठकमा ओली र प्रचण्डले भने यसबारे कुनै टिप्पणी नगर्ने रणनीति बनाएका छन् । स्थायी कमिटी बैठक सकिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने ओलीको तयारी छ । त्यतिबेलै गौतमलाई समेत प्याकेजमै डिल गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउने तयारी उनको छ ।
गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मात्र लैजाने की मन्त्रीसमेत बनाउने भन्ने विषयमा ओलीले निकटहरुसँग पटक पटक छलफल गरेको स्रोतको भनाई छ । वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा मात्रै राख्दा धेरै खाले चलखेल हुनसक्ने निश्कर्ष निकाल्दै ओलीले आफूबाट टाढा जान नदिने भएका छन् । यसका लागि सम्भवतः गौतमसमेत नयाँ पुर्नगठनमा पर्नुहुने छ – स्रोतले भन्यो ।
तर अर्थ मन्त्रालय भने नदिने उनको तयारी रहेको छ । मिलेसम्म गृह वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर भएपनि गौतमलाई मन्त्री बनाउने ओलीको तयारी रहेको छ । यसबारे ओलीले गौतमलाई जनाउ दिइसकेको स्रोतको भनाई छ । गौतमले भने सकेसम्म आफूलाई अर्थ नै दिन माग गरेका छन् ।
संभवतः आउने आइतवार पुर्नगठन हुने छ– बालुवाटार निकट स्रोत भन्छ । वामदेवलाई ल्याउने विषयमा प्रचण्डसमेत सहमत रहेकाले गृहको सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ । यस सम्बन्धमा नेता नेपाल र खनाललाई भने खासै जानकारी दिइएको छैन । त्यसैले दुई अध्यक्ष बसेर बनाउने मोडालिटी अनुसार पुर्नगठन गरिने छ – स्रोतको भनाई छ ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा तगारो बने गौतम १३ घण्टा पहिले
ओलीको प्रतिगामी तयारी नेता व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय टुक्र्याउँदै १५ घण्टा पहिले
पुनर्गठनमा बढ्यो सकस : ओली र प्रचण्डबीचकाे छलफल निष्कर्षबिहीन २ दिन पहिले
ठट्टा हैन हाम्रो राष्ट्रवाद ! ४ दिन पहिले
चीनको अर्थतन्त्र २.० प्रतिशत बढ्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण ८ घण्टा पहिले